वीरगन्जमा जनता आवास कार्यक्रम उद्घाटन
वीरगन्ज, २७ फागुन । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यालयको प्रदेश नं २ को वीरगंजमा उद्घाटन भएको छ ।
फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिनेछ : लक्ष्मण थारु
कैलाली, २६ फागुन । थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिने चेतावनी दिएका छन् ।
‘जनअभिमत’ भनेको ‘जनमत संग्रह’ होइन : गृहमन्त्री
काठमाडौं, २६ फागुन । नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको ११बुँदे सहमतिको बुँदा नं. २ मा उल्लेखित जनअभिमतलाई जनमत संग्रहको रुपमा परिभाषित गरिरहँदा त्यसबारे गृहमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
लु मलाई कसैले बोक्सी लागेर देखाओस् त ! : प्रधानमन्त्री
रौतहट, २५ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थिरताका कारण देश विकास सहज भएको बताएका छन् ।
प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैनौं : प्रचण्ड
रौतहट, २५ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नं २ को सरकार तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।
१५० किलोको मालाले होइन सही नीति र विचारले बन्छ : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
नुवाकोट, २५ फागुन । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पार्टी नेता प्रधान नभई नीति प्रधान हुनुपर्ने कुरा बताएको छ ।
सुशासन, सम्वृद्धि र आर्थिक स्थायीत्वका लागि युवा नेतृत्व आवश्यक
बाँके, २५ फागुन । बाँकेको सुशासन, सम्वृद्धि र आर्थिक स्थायीत्वका लागि युवा नेतृत्वको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
आफ्नै प्रशासनिक अधिकारी राख्ने प्रदेश सरकारको तैयारी
जनकपुरधाम, २४ फागुन । संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नै मातहत राखी सर्वशक्तिमान बनाउने तैयारी गरिरहेको बेला प्रदेश नं. २ को सरकारले आफ्नै प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी राख्ने तैयारी शुरु गरेको छ ।
सीके राउतले छोडे ‘स्वतन्त्र मधेश’को एजेन्डा, सरकारसँग गरे ११ बुँदे सहमति (सहमतिपत्रसहित)
काठमाडौं, २४ फागुन । नेपालबाट मधेशलाई अलग गरेर छुट्टै राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा रहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतले नेपाल सरकारसँग सहमति गरेका छन् ।
डा.सीके राउत र प्रधानमन्त्री ओली एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्दै, डा.राउतले स्वतन्त्र मधेशको नारा छोड्लान् ?
काठमाडौं, २४ फागुन । छुट्टै मधेश राष्ट्र निर्माणको अभियान चलाइरहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्षसहित ४० जिल्लाका नेता कार्यकर्ता राजपामा प्रवेश गर्दै
काठमाडौं, २४ फागुन । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष मानध्वज बलोनको नेतृत्वमा ४० जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा प्रवेश गर्दैछन् ।
डा.सीके राउत रिहा
काठमाडौं, २३ फागुन । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउत रिहा भएका छन् ।
अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण : थाकस
काठमाडौं, २३ फागुन । टीकापुर घटनासम्बन्धि जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको आरोप थारू कल्याणकारिणी सभाले लगाएको छ ।
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.राउतलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, २३ फागुन । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
लक्ष्मण थारुलाई राजपा अध्यक्ष ठाकुरद्वारा स्वागत
काठमाडौं, २३ फागुन । टीकापुर घटनाको प्रतिवादीको रुपमा सजाय काटिसकेपछि रिहा भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मण थारुलाई स्वागत गरिएको छ ।
ओली सरकारबाट राजपाको समर्थन फिर्ता
काठमाडौं, २२ फागुन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
कैलाली, २२ फागुन । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट अत्यधिक मतबाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ ।
शहीदको सपना पूरा गर्न पार्टी एकता : प्रधानमन्त्री ओली
झापा, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीदको सपना पूरा गर्न पार्टी एकता गरिएको बताएका छन् ।
नागरिकता विधेयकबारे विवेकशील साझाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, २१ फागुन । हाल संसदमा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधान प्रति प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरुबीच नै मतभेद रहेको र नागरिक समाजका सदस्यहरू बिच पनि विविध चिन्ता र चासो देखिएको अवस्था प्रति विवेकशील साझा पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रदेश २ को आर्थिक विकासलाई उच्च बिन्दूमा पुर्याउन संघीय सरकार प्रतिबद्ध : उपप्रम यादव
जनकपुरधाम, २१ फागुन । प्रदेश नं. २ लाई समृद्ध बनाउने विषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विज्ञहरु बीच जनकपुरधाममा वृहत छलफल सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौँ, २१ फागुन । सङ्घीय समाजवादी नेवाः सङ्घको बार्षिक सभा तथा पुनर्गठन कार्यक्रम यहि शनीवार काठमाडौँको नरदेवीमा सम्पन्न भएको छ ।